RASMI: Giacomo Bonaventura oo qalliin u baahday (Imisa ayuu maqnaan karaa?) – Gool FM
RASMI: Giacomo Bonaventura oo qalliin u baahday (Imisa ayuu maqnaan karaa?)
(Milano) 30 Jan 2017 – Kooxda AC Milan ayaa ku dhawaaqday in Giacomo Bonaventura uu u baahan yahay qalliin dhanka muruqa ah, kaddib markii uu shalay ku dhaawacmay kulankii Udinese, iyadoo ay Rossoneri sidoo kale sheegayso inay tijaabooyin dheeraad ah qaadi doonaan.
Waxaa haatan la xaqiijiyanaa in 27-jirkani uu u baahnaan doono qalliin, taasoo ka dhigan in ugu yaraan uu bilo maqnaan doono.
“AC Milan waxay ku dhawaaqaysaa in kaddib tijaabooyinkii maanta in Giacomo Bonaventura uu wax ka noqday muruqa celiyaha ah ee cajirka bidix,” ayuu u dhignaa warka kasoo baxay Milan oo sidoo kale lagu sheegay inuu qalliinka fulin doono Professor Sakari Orava.
Sida ay sheegayso ANSA, Bonaventura wuxuu maqnaan karaa muddo 4 billood ah, taasoo ka dhigan haddii ay sidaa noqoto inuu fasal-ciyaareedkani u dhamaaday.
Chelsea oo xiisaynaysa saxiixa weerar yahanka Celtic ee Moussa Dembele
Juve oo laacibiin lala xiriirinayo & Giuseppe Marotta oo ka hadlay waxa ay ka yeelayaan suuq-jiilaalkan berri xirmaya